६ ठेकेदारको निर्माण प्रशासनमा राज, ५५ अर्बको ठेक्कामा बाँडचुडीको खेल ! Bizshala -
६ ठेकेदारको निर्माण प्रशासनमा राज, ५५ अर्बको ठेक्कामा बाँडचुडीको खेल !
रुद्र पंगेनी-खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
उच्च सूत्रका अनुसार, यस्तो ‘प्याकेजिङ’ पछि कुन ठेक्का कसले लिने भन्नेमा यी ‘ठूला’ बीचमा सहमति हुन्छ । सोही अनुसार ठेक्का जसका लागि तय भएको हो उसले लागत अनुमान भन्दा अलिक थोरै अर्थात् १ प्रतिशत भन्दा न्यून अङ्कमा ठेक्का हाल्छ । अनि प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि ठूला ठेकेदार समूहका अन्य सदस्यले ठेक्का अंक भन्दा बढी अङ्कमा टेण्डर हाल्छन् । परिणाम उनीहरूले सहमति गरेकै व्यक्तिले ठेक्का प्राप्त गर्छ । “ठेक्का सूचना फगत प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै निकालिन्छ । ठेक्का पाउने व्यक्ति/कम्पनी पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ” महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, “पछिल्लो अढाइ वर्षमा मात्रै लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का यसैगरी लागेको छ ।”